Soo dejisan IObit Uninstaller 9.3.0.11 – Vessoft
WindowsNidaamkaMaaraynta faylkaIObit Uninstaller
Qeybta: Maaraynta faylka
Bogga rasmiga ah: IObit Uninstaller
Wikipedia: IObit Uninstaller
IObit Uninstaller – qalab aad u fiican oo laga saaro software aan faa’iido lahayn. Barnaamijkani wuxuu ka saari karaa barnaamijyada, faylasha casriyeynta ee Windows iyo codsiyada, plugins iyo qalabyada baayaclaha, faylasha haraaga lagu rakibay nidaamka. IObit Uninstaller ayaa soo bandhigeysa liis dhamaystiran oo ku saabsan barnaamijka lagu rakibay kombiyuutarka, wuxuu bixiyaa xulashada kuwa aan loo baahnayn, abuuritaanka xarun soo kabashada iyaga oo bilaabi doonta habka looga saarayo kooxdooda oo ay la socdaan faylalka haraaga. IObit Uninstaller waxay ogaaneysaa dhammaan baakadaha lagu rakibay software-ka, waxay muujiyaan macluumaadka ku saabsan iyaga waxayna kuu ogolaanayaan inaad si buuxda u tirtirto. Nidaamku wuxuu bixiyaa codsiyada khasabka ah ee codsiyada haddii ay dhacdo in codsiyada aan la tirtiri karin sida caadiga ah. IObit Uninstaller ayaa sidoo kale taageertay barnaamijka si loo casriyeeyo software-ka la joojiyo iyo qalab loo adeegsado si loo kordhiyo waxtarka PC.
Kala saarista codsiyada Windows
Nadiifinta feylka haraaga
Kala saarida qalabka adeegsiga shabakadaha iyo kordhinta
Ka saarista khasabka ah
Ka saarida joogtada ah ee faylasha la soo xulay
Darawalka Darawalnimada – softiweerku wuxuu leeyahay saldhig darawalnimo oo ballaaran iyo nidaam caqli badan oo lagu soo dejiyo darawallada daruuriga ah ee si weyn loogu tijaabiyay rakibaadda amaan ee nidaamka.
Agabka in defrag drives la tiro balaadhan oo ah muuqaalada waxtar leh. software wuxuu kuu ogol yahay in aad ka shaqayso hababka defragmentation oo ayna.
Advanced SystemCare – waa qalab lagu horumariyo waxqabadka kumbuyuutarka oo lagu hagaajiyo dhiqlaha nidaamka. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameysid skaanka oo qoto dheer isla markaana aad xalisid dhibaatooyinka kala duwan.
Faallo ku saabsan IObit Uninstaller
IObit Uninstaller Xirfadaha la xiriira
Bixiyaha faylka bilaashka ah – softiweer waxaa loogu talagalay in lagu furo faylalka ka jawaabaya qalad ku dhaca isku dayga isticmaale ee ah in la tirtiro, nuqul laga sameeyo, dib loo beddelo ama la dhaqaajiyo.
qalab caanka ah si ay u maareeyaan faylasha iyo xubno kala duwan oo ka mid ah nidaamka. software wuxuu taageeraa plugins badan oo waxtar leh iyo korontada dhisay-in.
Tani waa noocyo kala duwan oo software ah iyo goobo dheeraad ah oo lagu kordhiyo howlaha guud ee Maamulaha Faylka Taliyaha Guud.
CrystalDiskMark – softiweer waxaa loogu talagalay in lagu tijaabiyo waxqabadka diskiyada adag. Softiweerku wuxuu cabiraa xawaaraha akhrinta xogta iyo duubista baloogyada bakhtiyaa-nasiika ah ee cabir gaara.
AVG Clear – utility waxaa loogu talagalay in meesha looga saaro dhammaan xogta la xiriirta barnaamijyada AVG, oo ay ku jiraan galka diiwaangelinta, darawalada iyo faylasha rakibaadda.
qalab heer sare ah waxaa loogu talagalay si ay u xaliyaan dhibaatooyinka ka mid ah dadka indha la ’si ay u maareeyaan computer oo uu joogaa internetka.
Banshee – waa ciyaartooy dhameystiran oo dib u ciyaaraya feylasha maqalka iyo fiidiyaha. Sidoo kale, ciyaartooygu wuxuu taageeraa dib u soo celinta codadka iyo idaacadaha.